APOKALIPSY 21.9-22.5 | Fitandremana Ankadifotsy
Ilay ampakarina (9-21) voaravaka ho an'ny vadiny dia ny Zanak'ondry. Tanàna masina sy lafatra. Tsy norafetin 'ny tanàn'olombelona. Mitondra ny voninahitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra manontolo. Mamirapiratra aoka izany noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao no hivantanan' ny mpino rehetra. Azonao an-tsaina ve izany hoe hitoetra miaraka amin’ny Tompo mandrakizay amin'ny fanatrehany?
Ny anaran'ny foko roa ambin'ny folo sy ny anaran'ireo Apostoly roa ambin'ny folo dia maneho ny fahamarinana sy ny firindràn'ny Soratra Masina. Ny finoantsika dia niorina tamin'ny fampianarana nentin'ireo Apostoly. Sambatra ve ny Apostoly? Isika koa, raha hita voasoratra ao anatin'ny bokin'ny inana ny anarantsika!
Ny zanak'ondry, fahazavàn'ny tanàna (22-27). Ny fiovana maherivaika ao amin'ny tanàna dia ny tsy fisian'ny tempoly. Ny Tsitoha no tempoliny sy fahazavàna ao- Misokatra ny varavarana satria tsy mila arovana intsony. Tsy misy halatra, na faharatsiana afaka handoto an' I Jerosalema vaovao.
Andriamanitra no loharanon'aina (22.1-5). Raha mampitaha ny 22.1-2 amin'ny Genesisy 2.9-10 isika dia hita fa ny fanavotana izao tontolo izao dia tsy vitan'ny fiverenana amin'ny fiandohan'ny famoronana. Efa aty amin'ny fiafaran'ny tantara izay ny olona vao afaka higoka ny fahatsarana rehetra izay nesorina taminy. Ilay hazon 'aina izay tsy navelan'Andriamanitra nihinanan'i Adama sy Eva dia azon 'ny mpino hatonina ankehitriny.
Manana ny tombokase maha zanaka ve ianao?